इसाईहरु किन प्रचार रोक्दैनन् ? – Shalom Nepal
शालोम नेपाल, धेरै मानिसहरुलाई यो अचम्म लाग्न सक्छ कि प्रत्येक ईसाइले किन येशु प्रचार गर्छन् ? यो आम जन-मानष्पटमा उब्जिएको प्रश्न हो । कतिको विचारमा यो पैसाको आडमा हो । यो एक्काईसौँ सताब्दि, जहाँ मानिस एक्लै बाँच्न पनि धेरै पैसा लाग्छ । यहाँ कसैसँग कसैलाई बाँड्न कुनै पैसाको रुख छैन । कति लाई लाग्छ कि यो पश्चिमाहरुको साम्राज्य विस्तार रणनिति हो । मित्रहरु, इसा-मसिह उहाँ एसिया महादेशमा आउनु भयो । एसियनहरुले नै पश्चिमाहरुलाई येशु प्रचार गरे । आज त्यहि पैँचो सबैलाई फिर्ता दिँदैछन् । कसैलाई आफ्नो धर्म संस्कृति त्याग्ने रहर त्यति बेला सम्म हुँदैन, जब सम्म त्यस ब्यक्तिलाई सत्य बताईएकै हुँदैन । दन्त्य कथाहरुले भुल्याएर, मुठ्ठिभरका मानिसहरुले कमाई खाने संस्कारको लदाई भित्रको पिँजडामा सत्यको वचन नआउनजेल मुक्ति, शान्ति, सत्य, न्याय, समानता, पापमोचन, अनन्त जीवन र छुटकाराको पर्खाइमा बस्नेहरुले त्यो अन्धकार त्याग्दैनन् जब येशुलाई विश्वास गर्छन तब उनीहरुमा सत्यका आत्माले बास गर्छ । उनीहरुले सत्य जान्नेछन् र सत्यले प्रत्येक मानिसलाई स्वतन्त्र गराउँछ ।
येशु सत्य हुनुहुन्छ । त्यसकारण सबै मानिसले येशुको प्रचार गर्छन् । किनकी सत्यसँग कसैलाई डर, लाज, दोमन हुँदैन । अमुल्य कुरा पाएकोमा खुसी हुँदै सत्य बताउन सबैलाई मनपर्छ । सत्यले अघिबाटै अन्धकारको बन्धन र त्यसबाट आउने अवरोधहरुलाई मनबाटै हटाइसकेकोले एक इसाई जहाँ पनि गएर निर्धक भएर येशु प्रचार गर्न सक्छ । किनकी येशु आफैँले भन्नु भयो बाटो सत्य र जीवन म हुँ ।
येशु आफैँले महान् आज्ञा संसारका सबै राष्ट्रका मानिसहरुलाई येशु प्रचार गर्ने, उहाँले सिकाएका कुराहरु सबैलाई सिकाउने, बप्तिसमा दिने र चेला बनाउने जिम्मेबारी दिनुभएको कारण एक ईसाइले आफ्नो जीवनको पहिलो कतव्र्य नै सत्यको समाचारको प्रचारलाई आत्मसाथ गर्छ । उसलाई त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्न कुनै बन्दुकले, तरबारले, विरोध, सतावट, कैद, कानुन र मृत्यु समेतले रोक्न सक्दैन । उ आफुले कमाएको कम्तिमा पनि १० प्रतिशत रकम चर्चमा दिन तयार हुन्छ । यसको अलबा उ आफैँ जिम्मेवारी पुरा गर्न आफ्नो खर्चपर्च आफैँ तय गर्छ ।
येशु प्रचार गर्नेहरु कहिले पनि येशु, पवित्रशास्त्र बाईबल र संसारसँग कहिल्यै संकोच मान्ने र शर्माउने र प्रचारमा लाज मान्ने गदैनन् किनकी येशु पवित्र हुनुहन्छ । उहाँको विरुद्धमा आज सम्म पनि इतिहास देखि वर्तमान सम्म एक जना पनि खडा हुन सकेको छैन, कोही भएका थिए भने परिवर्तित भए । बाईबल विज्ञान, अनुसन्धान र अध्यासबाट जाँचिएको पवित्रशास्त्र इश्रवाणी भएकाले त्यहाँ भएका सत्य प्रचार गर्न कुनै लाज नै छैन र हुँदैन पनि ।
इसाईहरु सत्यको समाचार लैजाँदा कसैको विरुद्धमा जाने, मानिसहरुलाई हानी हुने कुरा र विगार हुने कुरा लैजाँदैनन् । त्यसैले सत्य बाँड्दा खुसी हुन्छन् । उनीहरुलाई यो थाहा छ कि मानिसहरुले नबुझेर अस्विकार गरेपनि अथवा विरोध गरेपनि आफूले प्रचार गरेको सत्यले उनीहरुलाई जीवन दिने, पापबाट छुटकारा दिने, सत्य परमेश्वर येशुसँग मिलाप गराउने र अनन्त जीवनमा डोर्याउने कुरामा उनीहरु विस्वस्त हुन्छन् ।
इसाईहरु उधारो कल्पना बाँड्दैनन् । उनीहरु आफैँसँग पनि येशुलाई अंगाले देखि जीवनमा आएका प्रशस्त देखिने प्रमाणहरु हुन्छन् । उनीहरु आफैँहरु भुतबाट, कुलतबाट, आत्माहत्या, घृणित यौनकार्य, चोरी, हत्या, बौलाहपन तथा विभिन्न रोगहरुबाट छुटकारा पाएका हुन्छन् । यसले उनीहरुलाई अझ बढि प्रचारमा साहास दिएका हुन्छन् भने इसाई जीवनले गर्ने प्रचार भनेकै जिवन परिवर्तनको सजिव प्रमाण नै प्रचारको मुलआड, आधार र प्रेरक हो ।
परिवर्तित एक ईसाई अब उ आफ्नो आचारण, मनोवृति, व्यवहार र कामलाई सुधार गरेर जीवनमा अग्रसर हुन्छ । परिवर्तित सोच र उसको कामले उसलाई आर्थिक, पारिवारीक, सामाजिक, मनोवैज्ञानि र भौतिकलाभहरु दिन थाल्छन् र उनीहरुमा अरुहरुले भन्ने गरेका डलर उत्पादन गर्ने क्षमता राख्छन् । तर अरुहरु सिन्को नभाँची कुरा गर्नेहरुले चाहिँ इसाईहरुले डलर पाएको देख्छ, उसलाई पेट पोल्छ अनि उ एक ईसाईको जीवन परिवर्तनलाई धर्म माथीको प्राहार हो भनि विगुल फुक्न देखि पछि हट्दैन । अझ यसलाई त राजनितिक मुद्दा बनाएर इसाई विरुद्ध राज्य संयन्त्र पनि परिचालित हुन्छन् । यो मानिसहरुमा हुने अज्ञानता मात्रै हो ।
यसकारण कु(समाचारको अन्त्यको लागी येशुको सु(समाचार आजको नितान्त आवश्यकता हो । यो जुनसुकै परिस्थितिमा पनि निरन्तर अघि बढिरहन्छ । अनवरत यात्रामा हिँडेको इसाई रोकिँदैन र रोक्न पनि सकिदैन ।
Posted on December 8, 2020 December 8, 2020 Author Shalom Nepal
प्रभुमा सपरिवार आएदेखि मैले भेटेका आफन्त-साथी सबैलाई धेरथोर सुसमाचार सुनाउने बानी परिसकेको थियो र त्यसैले म वा मेरो परिवारको सम्पर्कमा आउनेजति सबैले सुसमाचार सुन्ने मौका पाएका थिए । बिदामा गाउँ गएको बेलामा पनि म सकेसम्म सबैलाई प्रभुबारे सुनाउँथें किनकि मैले पाएको मुक्तिको निश्चयता अरुले पनि पाउन् भन्ने म चाहन्थें, अझ भनूँ न; प्रभुले दिनुभएको महान […]
सम्बन्ध विच्छेदप्रति परमेश्वोरको ईच्छा के छ ?
Posted on May 30, 2020 May 30, 2020 Author Shalom Nepal
शालोम नेपाल – नयाँ नियमका यी अंशहरू ले यो मुद्दालाई सम्बोधन गर्दछ: मात्ति ५:३१-३२; १९:१-१२; मर्कुस १०:१-१२; लुका १६:१८; १ कोरिन्थी ७:१०-१६; भने व्यवस्था २४:१-४ मा यसको महत्त्वपूर्ण पृष्ठभूमि छ। नयाँ करारको कालखण्डमा सम्बन्ध विच्छेद सम्बन्धी सांस्कृतिक समझका कारण व्यवस्थाको व्याख्याले गर्दा जवाफ दिन यो एकदम कठिन प्रश्न हो, त्यसकारण यस मुद्दामा ईसाइहरूको फरक दृष्टिकोण […]
Posted on May 23, 2020 May 26, 2020 Author Shalom Nepal
शालोम नेपाल – परमेश्वर स्वयम् आफै विवाहको आविष्कारक हुनुहुन्छ। जब परमेश्वरले हव्वालाई सृष्टि गर्नुभयो, आदम एकदमै खुसी थिए। तिनीहरू यस कुरामा स्पष्ट थिए कि दुवै एक अर्काको निम्ति बनिएका हुन् । निष्कर्ष यस्तो छ: “यसकारण मानिसले आफ्ना बाबु र आमालाई छोडछ र आफ्नी पत्नीसँग मिलिरहन्छ, र तिनीहरू एउटै शरीर हुन्छन्“ (उत्पत्ति २:२४)। ‘एक शरीर’ ले […]